Siyaasada Qarsoon ee Madaxweyne Cabdi Qaasim uu ku soo daabulayo Ergadiisa ,iyo Hotel Cusub oo islii laga dejin doono Ergadaas.Warbixin Xasaasi ah.
W/Q Dahir Abdulle ALasow,
Madaxweynaha Dowladda KMG ah Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa lagu waramayaa inuu soo daadgureeyn doono Ergo tirro ahaan kor u dhaafeeyso 180 siyaasi kuwaas oo la dejin doono badankood hotel ku yaal Xaafadda Somalida ku badan tahay ee ISLII.
Hotelka la dejin doono Ergadda Madaxweyne Cabdi Qaasim iskiisa u wato oo ah Hotel Cusub oo dhawaan laga dhisay Rainbow,ka EastLight ayaa warar Madaxbanaani sheegayaan in lacagtaasi uu bixin doono Madaxweyne Cabdi Qaasim qudhiisa halka warar kalena ay sheegayaan inuu Cabdi Qaasim balanqaadka dhaqaalaha Ergadaas ka heesto Jaamaccada Carabta oo sheegtay inay bixineeyso dhamaan Ergadiisa Taageeerayaasha ah lacagta ku baxeeyso mudada uu shirka socdo.
Inkastoo aanan guud ahaan la xaqiijin karin cidda bixin doonto dhaqaalaha ku baxayo 150 ergo ee Cabdi Qaasim iskiis u wato hadana Arrintaan ayaa qeeyb ka ah siyaasada muga weyn ee uu Ciyaarayo Cabdi Qaasim Salaad Xasan.
Madaxweyne Cabdi Qaasim oo Aaminsan in beesha caalamka iyo bahweynta hawiye intuba ay ka mas,uul ahaayeen burburkii Ragaadiyay dowladiisa ee ay ka dhaqaaqi weeysay 3 sano ayaa mar kale jaleecayo Qorshe Siyaasadeed Aargoosi ah taas oo ah mid wejiyo badan oo uu kula dabaaqayo Hogaamiyaasha kooxaha ee ka soo horjeeday inay Meelmarto dowladiisa.
Madaxweyne Cabdi Qaasim wuxuu soo wadaa Ergo xul ah oo mid walba beesha uu ka soo jeedo miisaan iyo Muuqaal ku leh si ay Baarlamaanka Cadkooda uga soo qaataan ,
Siyaasadaas ayaa qeeyb ka ah qaabka qarsoon ee Madaxweyne Cabdi Qaasim ku doonayo in Xisbigiisa dowladda uu ku helo Cod farabadan oo beelaha kla duwan ay ka soo hooyaan ama ka soo helaan raga ay siyaasada sxb,ka ka yihiin,waxa kale oo Ergadaan ay cariiri gelin doonaan hogaamiyaasha koxaha oo iyagana ku taamayay markii hore inay baarlamaanka galaan rag ku siyaasad ah oo ay isku haleeyn karaan habeenka cod bixinta .
Siyaasada kale ee uu Ciyaarayo Cabdi Qasim Salaad Xasan hadii ookiyaalaha Araga fog lagu eego waxaa Muuqato inuu dhawaan isu shaacin doono inuu ka mid yahay Musharixiinta Mar kale u istaagi doonto u tartanka Madaxweyne nimadda Somaliya isagoo huwan Magaca Xisbiga Wadaniga ah ee Somaliyed oo u macno ah siyaasiyiintii dowlada Carte ee Maamulkoodii la Cuuryaanshay.
Inkastoo la sii saadaalin karo inuusan mar kale Cabdi Qaasim heli doonin Madaxweynenimo hadana waxaa iska cad oo sida bisha oo kale u soo Muuqato inuu habeenkaas doorashada heli doono Codad miisaan leh hadii aysan balanta uga bixin raga Maanta ku garabka ah ee go,aanka qarsoodiga ah ay wada gareen.
Saadaasha Cabdi Qaasim laga sii bixin karaa habeenka cod bixinta iyo siyaasadiisa hordhaca waa mid iska cad oo mugdi iyo madmadoow ka fog marka la eego sida uu Cabdi Qaasim ugu ciil cunsan yahay beelweynta uu ka dhashay ee hawiye hogaamiyaashooda gaar ahaan qabiilka ugu heeybta dhaw dhinaca habargidir marka tooshka iftiinka badan lagu sii shido ee uu ku tuhmayo inay hogaamiyaashaas hormuud ka ahaayeen in ciida Afka loo geliyo dowladii Carte ee Cabdi Qaasim ka soo hantay hogaanka sare.
Waxaa laga yaabaa inuu Cabdi Qaasim habeenka cod bixinta kubadda laga sugayo inuu u soo baaso ama kula saftaa koox ku heeyb ah oo isku haleeynayo uu u laado oo baas lama filaan ah banooniga ku siiyo xulka kuwaas ka soo horjeedo maadaama uu dib u xasuusto sidii shalay baalasha looga rifay markii uu lahaa power,ka ama awooda siyaasadeed ee u hergelin kartay inuu hanto dhamaan hogaanka sare ee Somaliya.
Inkastoo indhaha Xeeldheerayasha arkaan shaki baaxadweyn oo beesha Caalamka Cabdi qaasim ka qabto ,hadana isaga taas uma fadhin doono ee waxaa ka go,aan ah inuu ka faa,iideeysto taageeradda dhinaca dhaqaale iyo siyaasadeed ee uu ka helayoJaamacadda Carabta,waxaa uuna iska dhega tiri doonaa dhamaan xan hoosaadka iyo tuhunka Reer Galbeedka ka qabaan gaar ahaan dowladda mareykanka oo ku xaglineeyso inuu xiriir hoose la leeyahay Xubnaha sare ee AL Qaacido.
Inkastoo Cabdi Qaasim uu la kulmay dhamaan hogaamiyaal farabadan oo siyaasada kaga soo horjeedaty hadana lama ogga waxa ay ku heshiiyeen iyo heshiiskastaa oo ay wada gaaraan sida uu u hergeli karo maadaama ay hore u jirtay hagardaamo farabadan oo heeryadda looga qaaday Cabdi Qaasim.
Shaki iyo Madmadoow kuma jiro in Cabdi Qaasim la soo shir tegi doono sheeko uu iska soo Turxaanbixiyay waxaase la isi sii weeydiinkaraa labo ,sulaal oo is garabtaas kuwaas oo kala ah,Cabdi cidna daah kama saarno inuu u ciil cunsan yahay dhamaan intii Cuuryaamisay Mas,uuliyadii loogu Caleema saaray Tuuladda Carto,balse Ma Cabdullaahi Axmed Cadowgii shalay Carte uga balanqaaday la shaqeeynta dowladiisa ee ciyaarta uga baxay ayuu ka cad goosan doonaa oo uu oran doonaa ,shalaad diiday inaan cuna ana Maanta kaa ciideey,Mise Ciilkaas ka weeyn buu u qabaa Hogaamiyaasha C/llahi Yusuf iyo Ina Ceydiid Horkacaayn ee Maantana u buko inay helaan Codka garabyadda Somaliya,Su,aalahaas haa iyo Maya midna lagama Oranka karo hada Maadaama aan la gaarin Maalinta Xaqiiqada sheekadaas hasse ahaatee waxaa la sii wada Eegi doono Miisaanka Cadaaladda ee Cabdi Qasim iyo Ciilka uu Qabo cida uu kula dul dhaco.
Waxaa Qoray,Dahir Abdulle ALasow,Nairobi kenya
MAXAY INA YEESHAY CAARTA